Havana kukwira kuZioni uye vakaparadzwa muAuschwitz, Rebbe akavaudza kuti vasakwira. Rabhi Michael Avraham
Havana kukwira kuZioni uye vakaparadzwa muAuschwitz, Rebbe akavaudza kuti vasakwira.
Responsa > Category: Kutenda > Havana kukwira kuZioni uye vakaparadzwa muAuschwitz, Rebbe akavaudza kuti vasakwira.
Kunyara nekunyara Yakabvunzwa 5 months ago
Mhuri yangu yakagutsikana kudzokera kuZion. (Vachitevera ruvengo rwavaHedheni vakanga vakavapoteredza, vakanga vakapfuma zvikuru uye vasingashayiwi chinhu).
Rebhi akavaudza kuti vagare muhutapwa uye vakavimbisa kuti zvaizova zvakanaka.
Tendai kuti mupanduki haana kudzokera kuZioni naEfraimi muAuschwitz yechiXNUMX uye ropa rembeu yavowo kubva kuna rebhi akapikira uye nokuda kwechipikirwa chavo rakaparadzwa.
Asi muna Jeremiah XNUMX zvichisiyana nevaporofita venhema vanokurudzira kudzoka kweZion naJeremia muzita raMwari anoti kwete.
Mamwe makore 70 chete
Uye zvino maitiro akadzoswa, muBabironi isu tichavaka dzimba uye ticharoora vakadzi. Uye veJerusarema kuti vaurayiwe uye nenzara.
Saka chii chakanaka?
Kudzokera kuZion here kana kuti kunogara muutapwa?
Iri ibasa rakaoma. Zvese zviri zvega. A rebbe akataura maonero ake kuti asauye nekuda kwezvikonzero zvake, akataura chimwe chinhu chiri pamutemo. Izvo zvakazokanganisa hazvimusungire pane zvakabuda. Hapana ropa remunhu riri pamaoko ake. Kana akaita zvitsidzo zvisingatarisirwi zvichida zvakawanda.
Kana vari vaporofita, vanotaura zvinhu mashoko echiporofita, saka pane nhaurirano yakasiyana zvachose. Kana vakavimbisa chero chinhu muzita raJehovha.
Kazhinji, mhinduro kumubvunzo wekuti kutamira kune imwe nyika haisi nguva dzose mhinduro yakafanana. Dzimwe nguva zvakanaka kukwira uye dzimwe nguva kwete. Kunyangwe paine murairo wekugadzirisa nyika, asi muporofita anobvisa chero chinhu kubva muTorah muHolocaust kana neawa.
Sociology uye essence On Nekufa kwemushakabvu Prof. David Halvani Weiss (column 485)
Judah h On Iran iri pano here? Pamusoro peKufambira mberi uye Sane Liberalism (Koramu 483)